Baifern Pimchanok နဲ့ Mai Davika ကြားက စိတ်ဝင်စားစရာ အချက် (၈) ချက် - Asia News Bar
Baifern Pimchanok နဲ့ Mai Davika ကြားက စိတ်ဝင်စားစရာ အချက် (၈) ချက်
Mai Davika နဲ့ Baifern Pimchanok က ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အလွတ်တန်းဒိတ်ဒိတ်ကျဲမင်းသမီးချောတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက တသွေးတမွေးနဲ့ မတူညီစွာ လှပကြတာကြောင့် နာမည်ကြီးကြသလို သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း များစွာလူသိများထင်ရှားလှပါတယ်။ Mai နဲ့ Baifern ကြားက တူညီမှုရှိနေသလို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အချက် ၈ ချက်ကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။
1. မင်းသမီးချောလေးနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ဇာတိချက်မြုပ်ကတော့ ဘန်ကောက်မြို့ဖြစ်ပြီး ဘန်ကောက်မှာပဲ ကြီးပြင်းလာကြသူလေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
2. Mai နဲ့ Baifern ဟာ Thai Channel7နဲ့ လက်တွဲလုပ်ကိုင်ဖူးတဲ့ အနုပညာရှင်ဟောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Mai Davika ရဲ့ ပထမဆုံးသောဇာတ်လမ်းကတော့ ၂၀၁၀ တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ‘Ngao Kammathep’ ဖြစ်ပြီး Weir Sukollawat နဲ့ တွဲဖက်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ Baifern Pimchanok ကတော့ ၂၀၁၀ မှာပဲ ‘Wai Puan Guan Lah Fun’ ဒရမ်မာကို Moo Theerapat နဲ့အတူ ရိုက်ကူးပြသခဲ့ပါတယ်။
3. Baifern Pimchanok နဲ့ Mai Davika တို့ရဲ့ တူညီမှုတစ်ခုကတော့ မင်းသားချော Mario နဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ပြီး နာမည်ကြီးလာတာကြတာပါပဲ။ Baifern ကတော့ ၂၀၁၀ က ထွက်ခဲ့တဲ့ ‘A Little Thing Called Love’ (2010) ဇာတ်ကားကြောင့် လူကြိုက်များကျော်ကြားလာခဲ့ပြီး Mai Davika ကတော့ ၂၀၁၃ တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ ‘Pee Mak’ ရုပ်ရှင်နဲ့ အောင်မြင်ထင်ရှားလာခဲ့တာပါ။
4. ၂၀၁၃ မှာတော့ Mai Davika က Nampraw ကို မန်နေဂျာခန့်ခဲ့ပြီး Nampraw က Baifern Pimchanok ရဲ့ မန်နေဂျာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ၂၀၁၇ မှာတော့ Baifern ဟာ Nampraw နဲ့ လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ပါတယ်။
5. Mai နဲ့ Baifern နှစ်ယောက်စလုံးက စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်သွားတာနဲ့ အသစ်ချုပ်ဆိုခြင်း မပြုကြတော့ဘဲ Thai Channel7နဲ့ လမ်းခွဲကြပါတယ်။
6. Label တစ်ခုတည်းအောက်မှာ အတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ Mai နဲ့ Baifern က တော်တော်လေးချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်။
7. လက်ရှိမှာတော့ အလွတ်တမ်းမင်းသမီးနှစ်ယောက်စလုံးက ဘယ် channel နဲ့မဆို လက်ခံအလုပ်လုပ်နေတဲ့ နာမည်ကြီးထိပ်တန်းမင်းသမီး ၂ ယောက်အဖြစ် ရေပန်းစားနေကြပါတယ်။
8. အချစ်ရေးမှာတော့ Mai Davika က မင်းသာ‌းချော Ter Chantavit နဲ့ ခိုင်မာတဲ့အချစ်ရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားပြီး Baifern Pimchanok ကတော့ မင်းသား Top Jaron နဲ့ လမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်း လက်ရှိအချိန်အထိ Single ဘဝကို ကျေနပ်စွာခံယူပြီး တစ်ယောက်တည်း တောက်ပနေပါတော့တယ်။
Next အချိန်တိုအတွင်း မြင့်မားတဲ့စံချိန်သစ်ကို မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ BTS’s “Permission To Dance” »
Previous « ထူးထူးဆန်းဆန်း သဘာဝလွန်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ Romance ဆန်ဆန် ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားတဲ့ K drama (7) ကား
D.O. နဲ့အတူ မင်းသား ၈ ယောက်ပါဝင်တဲ့ Hyung Squad လေး ဘယ်လိုဖြစ်လာသလည်းဆိုရင်